Intee in le'eg ayaad ka taqaanaa xirxirida shaabadood? -CIXI DONGFENG SEALING&PACKING Co., Ltd
Intee in le'eg ayaad ka ogtahay xirmooyinka xirmooyinka?
Waqtiga: 2021-12-08 Hits: 7
Sidee loo doortaa habka xiridda marka la naqshadeynayo mashiinka? Maqaalkani wuxuu kaa caawinayaa inaad fahamto foomamka shaabadda firfircoon ee caadiga ah ee naqshadaynta farsamada. Waxay kala yihiin shaabad baakad, shaabad farsamo, shaabad gaasta engegan, shaabad shaybaarka,
shaabad saliid, shaabad firfircoon iyo shaabad wareeg ah. Maanta, aynu marka hore si wadajir ah uga wada hadalno shaabadda xirmada!
Xirmooyinka xirmooyinka waxaa loo qaybin karaa xirmooyin jilicsan oo jilicsan, xirmooyin adag oo xirxiran, iyo xirmooyinka baakadaha qaabaysan iyadoo loo eegayo sifooyinkooda qaabdhismeed.
1) Shaabad baakad jilicsan
Nooca xirxirida jilicsan: Baakaynta
Xiritaanku inta badan waxaa laga sameeyaa dunta jilicsan, kuwaas oo lagu buuxiyey godka la shaabadeeyey iyadoo la raacayo xariijimo leh aag iskutallaab ah oo afar gees ah. Xoogga riixaya waxaa soo saaray qanjidhku si uu u cadaadiyo baakadda oo uu ku qasbo baakadda inay noqoto
lagu cadaadiyo dusha daboolka (shaft). Dusha sare iyo godka la xidhay), xoogga shucaaca ee saamaynta shaabadeynta ayaa la abuuraa, sidaas darteed door xirid.
Munaasabadaha lagu dabaqi karo xirmooyinka jilicsan:
Qalabka wax lagu duubo ee loo xushay baakad ayaa go'aamisa saameynta xiritaanka ee xirmada. Guud ahaan, alaabada baakaduhu waxay xaddidan yihiin heerkulka, cadaadiska iyo pH ee dhexdhexaadiyaha shaqada, iyo qallafsanaanta dusha sare iyo
eccentricity ee qalabka farsamada ee ku shaqeeya xirmooyinka iyo xawaaraha xariiqda, iwm, waxay sidoo kale yeelan doonaan shuruudo loogu talagalay xulashada alaabta wax lagu duubo.
Xirmooyinka graphite waxay u adkeysan kartaa heerkulka sare iyo cadaadiska sare, waana mid ka mid ah alaabooyinka ugu waxtarka badan ee lagu xalliyo dhibaatada heerkulka sare iyo xiritaanka cadaadiska sare. Iska caabbinta daxalka, xirid heersare ah ayaa qabata
-Ance, shaqo deggan oo la isku halayn karo.
Xirmooyinka Aramid waa nooc ka mid ah fiber organic-xoog sare leh. Xirmooyinka tolmada leh waxaa lagu shubay emulsion polytetrafluoroethylene iyo saliid.
Xirmooyinka Polytetrafluoroethylene waxay ka samaysan tahay xabagta kala firdhisan ee polytetrafluoroethylene saafi ah sida walxo ceeriin ah, oo marka hore laga dhigay filim ceeriin ah, ka dibna la maroojiyay, tidcan oo lagu dhejiyay xirmo. Waxaa si weyn loogu isticmaali karaa cuntada, daawooyinka,
warqad-samaynta, fiber kiimikaad, iwm. Shuruudaha nadaafadda, iyo bambooyin iyo bambooyin leh warbaahin daxalaysa oo xooggan.
2. Shaabad baakad adag
Waxaa jira laba nooc oo xirmooyin adag oo xirxiran: giraanta kala jeexan iyo giraanta dillaacsan.
Hore: Qalabka caadiga ah iyo baaxadda codsiga O-rings
Xiga: Waa maxay hababka daadinta giraanta xidhida? Waa maxay sababta daadad?